Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! नेपाली बजारमा सोमबार बढ्यो सुनको भाउ, तोलामा कति ?
नेपाली बजारमा सोमबार बढ्यो सुनको भाउ, तोलामा कति ?
ग्लोबल संवाददाता सोमबार, साउन ४, २०७८
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य बढेको छ ।
नेपाल सुनचाादी व्यवसायी महासंघका अनुससार आइतबारको तुलनामा सोमबार सुन प्रतितोला २०० रुपैयाँले बढेको हो । सोमबारका लागि छापावाला सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार ८००, तेजावी ९२ हजार ३०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस्तै चाँदी प्रतितोला १ हजार २९० रुपैयाँ भाउ तोकिएको महासंघले जनाएको छ ।
आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार ६०० रुपैयाँ, तेजावी ९२ हजार १०० रुपैयाँ र चाँदी तोलाको १ हजार २९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतबारको तुलनामा सोमबार चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेको महासंघले जनाएको छ । शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन तोलाको ६०० रुपैयाँ र चाँदी तोलाको २५ रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८, ११:४६:००
शनिबार, साउन १६, २०७८ साताको शेयर बजार : ६७ अर्ब ७४ करोडको कारोबार
शुक्रबार, साउन १५, २०७८ सुनको मूल्यमा ५ सय रुपैयाँले बढ्यो
बिहीबार, साउन १४, २०७८ २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने पक्षमा छु : मन्त्री भुसाल
बिहीबार, साउन १४, २०७८ चितवनमा किसानलाई दूध दुहुने र घाँस काट्ने मेसिन हस्तान्तरण
मंगलबार, साउन १२, २०७८ सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, आज तोलाको ९१ हजार ८ सय
मंगलबार, साउन १२, २०७८ तीन कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुन कम्पनीको कति ?